လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ ရုရှားဓါတ်ပုံဆရာရဲ. အလန်းစားစတိုင်နဲ့ Follow Me ဓါတ်ပုံတွေ | Buzzy
လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ ရုရှားဓါတ်ပုံဆရာရဲ. အလန်းစားစတိုင်နဲ့ Follow Me ဓါတ်ပုံတွေ
သူ့မော်ဒယ်တွေ အလန်းဆုံးဆိုတာ မငြင်းနိုင်
"Follow Me" ဓါတ်ပုံတွေဟာ စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ Murad Osmann နဲ့ Natalia Zakharova တို့ ရိုက်ကူးပြီး အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ရာကနေ နောက်ပိုင်း စုံတွဲတော်တော်များများလည်း လိုက်ရိုက်ကြပြီး ကမ္ဘာနဲ့တစ်လွှား အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လည်း များစွာသော စုံတွဲတွေဟာ များစွာသော ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးပြီး တင်ကြလေ့ ရှိပြီး ၊ အခုပုံရိပ်တွေကတော့ sexy အကျဆုံးသော ပုံရိပ်တွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
"Follow Me" ဓါတျပုံတှဟော စုံတှဲတဈတှဲဖွဈတဲ့ Murad Osmann နဲ့ Natalia Zakharova တို့ ရိုကျကူးပွီး အငျစတာဂရမျမှာ တငျရာကနေ နောကျပိုငျး စုံတှဲတျောတျောမြားမြားလညျး လိုကျရိုကျကွပွီး ကမ်ဘာနဲ့တဈလှား အောငျမွငျခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ယနခေ့တျေမှာဆိုရငျလညျး မြားစှာသော စုံတှဲတှဟော မြားစှာသော ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ရိုကျကူးပွီး တငျကွလေ့ ရှိပွီး ၊ အခုပုံရိပျတှကေတော့ sexy အကဆြုံးသော ပုံရိပျတှလေို့ သတျမှတျရမှာပါ။
ရုရှားဓါတ်ပုံဆရာ Chernyavsky Kirillက ဒီအငြင်းပွားဖွယ် ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ခဲ့ပြီး တစ်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ အချို.လူတွေက သဘောကျသလို ၊ အချို.အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကလည်း သဘောမကျပါဘူး ၊ လွန်ကဲလွန်းစွာ ဖော်ချွတ်ထားလို့ စိတ်ပျက်တယ်လို့ ဆိုသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချို.ကလည်း လူမှုကွန်ယက်မှာ မတင်သင့်ဘူးလို့ ဆိုနေကြပါတယ်။
ရုရှားဓါတျပုံဆရာ Chernyavsky Kirillက ဒီအငွငျးပှားဖှယျ ဓါတျပုံတှကေို တငျခဲ့ပွီး တဈခဏလေးအတှငျးမှာပဲ လူမှုကှနျယကျမှာ ရပေနျးစားသှားခဲ့ပါတယျ။ အခြို.လူတှကေ သဘောကသြလို ၊ အခြို.အငျတာနကျ အသုံးပွုသူတှကေလညျး သဘောမကပြါဘူး ၊ လှနျကဲလှနျးစှာ ဖျောခြှတျထားလို့ စိတျပကျြတယျလို့ ဆိုသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အခြို.ကလညျး လူမှုကှနျယကျမှာ မတငျသငျ့ဘူးလို့ ဆိုနကွေပါတယျ။